काठमाडौंमा एकै परिवारका पाँच संक्रमित - Dainik Nepal
काठमाडौंमा एकै परिवारका पाँच संक्रमित
दैनिक नेपाल २०७७ साउन १२ गते ६:४९
काठमाडौं, १२ साउन । महाबौद्धका एक व्यवसायीको परिवारका पाँच सदस्यमा कोरोना भाइरस पोजिटिभ पाइएको छ ।
शुक्रराज अस्पतालका निर्देशक डा. सागरकुमार राजभण्डारीले एकै परिवारका पाँच सदस्यलाई कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि गरे। माइत आएका बेला परिवारका अन्यमा संक्रमण भएको हुन सक्ने डा. राजभण्डारीले बताए। नाति, नातिनीसहित हजुरबुवा, हजुरआमा, आमालाई पनि संक्रमण पुष्टि भएपछि शुक्रबार र आइतबार अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो। उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ।
डा. राजभण्डारीका अनुसार कोरोना पुष्टि भएकामध्ये एक जनामा डेंगुको लक्षणसमेत देखिएको छ। ‘स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ। दुई जनामा सामान्य खोकी छ। अन्य लक्षण देखिएको छैन’, डा. राजभण्डारीले भने।
नेपालमा संक्रमितको संख्या १८ हजार ६ सय १३ पुगेको छ। यीमध्ये १३ हजार १ सय २८ जना निको भएका छन्। कोरोनाबाट ४५ जनाको ज्यान गएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा दिनेश गाैतमले समाचार लेखेका छन् ।